Rabshado ka Dhashay Olalaha Doorashada Xisbiga Kulmiye Ee Magalada Laascaanood.(Sawiro) | Awdalmedia.com
Rabshado ka Dhashay Olalaha Doorashada Xisbiga Kulmiye Ee Magalada Laascaanood.(Sawiro)
Rabshado ayaa ka dhacay fagaaraha Bandhiga awooda doorashada KULMIYE oo ahayd maaiintii shanaad, kadib markii ay dhalinyaro gadoodsan shiid ka bilaabeen dadka isu soo baxay dhexdoodii.
Fagaarahan oo ay isu soo bexeen kumayaal dad ah oo taageersanaa xisbiga kulmiye iyadoo uu halkaasi ku sugnaa gudoomiye Muuse Biixi Cabdi ayaa ahaa kii ugu taageerada Bdanaa.
Lama sheegin qasaare weyn oo halkaasi ka dhacay, walow la sheegay dad qasaare dhagxaani soo gaadhsiiyeen lagu daweynayey goobaha caafimaadka ee magaalada Laascaanood.
Gudoomiye ku xigeenka sadexaad ee Xisbiga KULMIYE Xuseen Aadan Cadde oo Hiiraan Online u waramayey ayaa sheegay in ay dad yar ahaayeen oo dhagxaan tuurayey, ciidanka oo islahaa yaanay qasaare dhicina waxa kor u rideen rasaas.
"Maanta si wacan ayay dadku isugu soo bexeen, waxaana laga dheehanayaa muulka guud ee bulshada iyagoo rabitaankooda muujinaya, wixii dhacayna cid waliba ha ka danbaysee waxba ma yeelin, sidii loogu talagalayna waa ku dhamaatay" ayuu yidhi Xuseen A. Cadde.
Rabshadahan oo Khalkhal xoog leh gelisey maalin muhiim u ah xisbiga Kulmiye ayaa la sheegay in ay bilaabeen dhalinyaro ka cadhaysan kooxo fanaaniin ah oo halkaasi heeso ka soo jeedinayey, iyadoo dhawrjeer oo hore dhalinyarada Fanka Laascaanood loo diidey in ay munaasabado fanka qabtaan.
Dhinaca kale Masuuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa sheegay in ay tahay arintani tahay abaabul ay soo sameeyeen WADDANI oo ay doonayaan in sharafta KULMIYE lagu dhaawoco.
Gobolka Sool oo aan awel cid badani ka codayn jirin ayaa sanadkan codoka yaalaa aad u badan yihiin, waxaana xisbiyada tartamaya ay muhiim ugu tahay maadaama gobolada kale qaababka taageero ee wax looga holo la yaqaaney haatan gobolkani uu ku cusub yahay taasina waata muhiimka ka dhigtay.